I-Hotele iCabanas ese Sun City - eSun City nge Holide
I-Hotele iCabanas ese Sun City
Indawo iSun City Resort, ese Mzantsi Afrika
iHotele iCabanas inikeza usapho ithuba lokuhlala eSun City ngamaxabiso afikelelekayo. Yonwabela iqela le midlalo yamanzi kunye, neminye imidlalo kumagumbi amakhulu.
Uncedo olukudidi oluphezulu eCabanas hotel, ese Sun City
Abantwana bayalungiselelwa nokuba bakweyiphi iminyaka
Indawo yokuhlala njengosapho eSun City
Imidlalo yase manzini iyafumaneka
Ihotele iCabanas ese Sun City inikeza iindwendwe uncedo oluxabisekileyo, olunjogene nezidingo zazo nosapho ngexesha bekwi holide yangase lwandle. Yeyona ndawo ilunge kakhulu yokuhlala iintsapho eSun City inamagumbi angama 380 ahlalisa kamnandi aquka amagumbi angama 24 ajonge ngase chibini, amagumbi angama 120 afanayo aqhelekileyo, amagumbi angama 32 entsapho ajonge ngase chibini, ama 201 wamagumbi entsapho aqhelekileyo kunye namanye amathathu afumanekayo.
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwingca engaphezulu kwe Waterworld, enikeza ichibi elikwi ndawo efukufuku. Elichibi libanzi yindawo yokudlalela imidlalo yamanzi kwindwendwe zonke, akukhathaliseki iminyaka.
Indawo iSun City Resort inene yi paradesi ebantwaneni. Iipuli ezifumaneka eCabanas hotel zenzelwe abantwana, ikhona ipuli engekho nzulu, ibekhona neyenzelwe abantu abadala, zombini zinamanzi enziwe shushu. Indawo iKamp Kwena yi paradesi yabantwana yokuzonwabisa kwaye ibagcina bonwabile ngexesha bendwendwele eSun City nge holide.
iCabanas Hotel ese Sun City inentlobo ezintathu zokutya kuquka ukuziphakela kangangoko ufuna kwindawo iPalm Terrace. Enye indawo i-The Famous Butcher’s Grill inikeza inyama yomzimba emnandi eyenziwe emlilweni, ngexesha isidlo sasemini esimnandi esingekho sikhulu sithengiswa eGrande Pool Bar.